Olee otú Naghachi iPhone Data enweghị ndabere
> Resource> iTunes> Olee naghachi iPhone Data enweghị iTunes ndabere
Olee otú Naghachi iPhone Data enweghị iTunes ndabere
1. iPad Kpọchiri Akpọchi
2. Mmiri mebiri emebi iPhone
3. iPhone Nọgidesiri na mgbake mode
4. iPhone Notes akara ngosi Na
5. Naghachi iPhone Ndi ana-akpo enweghị ndabere
6. View iTunes ndabere
7. Naghachi iPhone Video
8. Nwụrụ Anwụ iPhone Data Recovery
9. Naghachi iPhone Ndi ana-akpo
10. iMessages ka Computer
12. Naghachi WhatsApp Ozi na iPhone
13. Naghachi iPhone Data enweghị iTunes ndabere
14. Access iCloud ndabere
15. Naghachi Foto dị Ozi na iPhone
16. Save Foto si iMessages
Naghachi iPhone Data enweghị ihe ọ bụla ndabere
Ọ dịghị ndabere? Ị ka nwere ike naputa ehichapụ data gị iPhone na-enweghị ya!
Kpọmkwem iṅomi gị iPhone naghachi ehichapụ data, ọ dịghị ndabere chọrọ.
Naghachi faịlụ ruo 18 ụdị, gụnyere kọntaktị, ozi, ndetu, photos, video, ozi olu ozi olu, wdg
Ukwuu n'ihi na iPhone 6 Plus / 6 / 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS, niile iPads & iPod aka 5/4.
Preview furu efu data na ngwaọrụ gị otu otu n'ihu mgbake.
Na-enye ohere iji naghachi data furu efu ruru ka ndị dịgasị iche.
Enwere na agbanyeghị naghachi data si iPhone enweghị iTunes ndabere?
M na mberede ehichapụ ọtụtụ kọntaktị site na m iPhone 4, na-echefu kwado ha na iTunes. Ugbu a, m mkpa ha ngwa ngwa, ma m na na na nụrụ na ọ dịghị ụzọ naghachi ehichapụ data na ihe iPhone ma ọ bụghị site backup.Is na n'ezie? Enwere m ike naghachi data si iPhone onwe ya na-enweghị iTunes ndabere? Biko nyere! Daalụ n'ọdịnihu.
The na-ekwu na e nweghị ụzọ naghachi iPhone data enweghị iTunes ndabere bụ nnọọ ihe ọjọọ. Ruru ka pụrụ iche nkà na ụzụ nke iOS ngwaọrụ, ọ bụ nnọọ ike naghachi data kpọmkwem site iPhone onwe ya, ma ọ bụghị ihe agaghị ekwe omume.
Part 1: Naghachi Data kpọmkwem site iPhone enweghị ihe ọ bụla ndabere
Part 2: Naghachi iPhone Data si iCloud enweghị iTunes ndabere
Otú a dị mma maka ndị na-adịghị ihe ọ bụla ndabere maka ha iPhones mgbe data ọnwụ, ọ dịghịkwa on iTunes ma ọ bụ na iCloud. Nanị ụzọ dị mkpa ka ị na-agbalị na-na ịgụ isiokwu gị iPhone iji weghachite furu efu data na ya. Ebe a bụ otú na-n'okpuru.
Nzọụkwụ 1 Jikọọ gị iPhone ike iṅomi ya
Nke mbụ niile, na-esi gị iPhone jikọọ na kọmputa. Mgbe ị na-agba ọsọ usoro ihe omume, ị ga-ahụ na windo na nri ozugbo ọ achọpụta rụọ gị iPhone. Mgbe ahụ ị pụrụ nnọọ pịa "Malite iṅomi" bọtịnụ iṅomi gị iPhone maka ehichapụ data na ya.
Rịba ama: Ọ bụrụ na gị bụ ihe iPhone 4 ma ọ bụ iPhone 3GS, ị nwere ike ịgbanwee gaa na "Advanced mode" throught bọtịnụ na-egosipụta na ala-nri akuku nke window. Ọ nwere ike na-eme ka ị a miri nnọọ emi Doppler furu efu media ọdịnaya dị ka photos, videos, olu memo, wdg
Nzọụkwụ 2 Preview & naghachi data kpọmkwem site iPhone 6 Plus / 6 / 5S / 5C / 5 / 4S / 4 / 3GS / 3G
Mgbe iṅomi completes, niile data ị nwere ike nweta gị iPhone ga-egosipụta na edemede dị ka ndị na. Ịnwere ike ihuchalu ha niile tupu mgbake ịlele ihe ị chọrọ. Akara ha, wee pịa "Naghachi" button na ala, ị nwere ike ịzọpụta ha niile na kọmputa gị na otu Pịa.
Cheta na: Data ịchọta ebe a na-agụnye ihe i nwere na gị iPhone ugbu a. Ọ bụrụ na ị chọrọ naanị iji weghachite ehichapụ data gị iPhone, Mia bọtịnụ na-acha uhie uhie ebe na ala (Nani gosipụta ehichapụ ihe). Mgbe ahụ akara na-agbake ha.
Otú a bụ ịnara n'ihi na ọrụ bụ ndị nwere iCloud acount na kwadoo ha data ka iCloud. Ị nwekwara ike na-agbalị iji naghachi data maka iPhone si iCloud ndabere, mgbe ị na-adịghị na otu iTunes ndabere faịlụ ma ọ bụ na-adịghị ahụ data na na gị iPhone.
Nzọụkwụ 1 Sign na akaụntụ gị ibudata ma wepụ iCloud ndabere
Ị ga-ekpebi mgbake mode nke "naputa site na iCloud ndabere File" mgbe ị na-agba ọsọ Dr.Fone maka iOS na kọmputa gị. Mgbe ahụ ị pụrụ ozugbo banye na gị iCloud akaụntụ site n'itinye na Apple ID na paswọọdụ. A obere oge gachara, ị pụrụ ịhụ ndepụta niile ndabere faịlụ na akaụntụ gị. Họrọ onye ị chọrọ ibudata ya, na ike iṅomi wepụ ya mgbe e mesịrị. Ndị a niile na-ewe gị 3 clicks.
Cheta na: Wondershare ewe kpọrọ maka nzuzo gị. Ma na iCloud akaụntụ ma ọ bụ nkwado ndabere na mpaghara ọdịnaya, Dr.Fone maka iOS ghara ịnọgide na-ọ bụla ndekọ nke ha, na ebudatara faịlụ bụ naanị zọpụta na gị onwe gị obodo kọmputa.
Nzọụkwụ 2 Preview & selectively naghachi iPhone data enweghị iTunes ndabere
Dr.Fone Maka iOS nwere ike inyere wepụ niile ọdịnaya na nkwado ndabere na mpaghara faịlụ. Mgbe iṅomi akwụsị, ị nwere ike ihuchalu ha na Doppler N'ihi dị ka e gosiri na nri otu otu. Mgbe ahụ nne Mmetụta ihe ị chọrọ iji naghachi na-azọpụta ha na kọmputa gị otu mgbe.